Ihe mbụ Sony ama na-enweghị okpokolo agba enweworị aha: Sony Xperia A Edge | Akụkọ akụrụngwa
Sony gosipụtara na mmalite nke afọ na nkewa smartphone dị ka ọ dị ntakịrị, dabere na mmegharị ọ na-eme kwa afọ, mmegharị ndị na-aga megide ahịa nke ugbu a. N'oge ikpeazụ MWC, nke e mere na njedebe nke February na Barcelona, ​​anyị nwere ike ịhụ otú ọtụtụ mba si Sony ahọpụtaghị iji belata akụkụ nke ọkọlọtọ ọhụrụ ya.
Ọkọlọtọ ya maka afọ a, gosipụtara anyị ime dị egwu, nwere atụmatụ dị egwu, mana ọ dara na aesthetics, ihe mbụ ndị ọrụ niile na-achọ mgbe ha chọrọ ịgbanwe mobile: nha ihuenyo na akụkụ ya. Ọ bụ ezie na ọ bụ otu afọ mbubreyo, ọ dị ka ọ bụ na Japan ka ha ghọtara mmejọ ha, na afọ na-esote ma anyị chọọ Sony mbụ ama na-enweghị okpokolo agba.
Ọ bụrụ na onyogho a na-agbapụta agbapụ, dabara adaba na njedebe nke Sony na-ezube ịmalite n'ahịa ahụ, n'okpuru aha Xperia A Edge, a ghaghi ighota ya na o kwesiri ka ichere ya, obu ezie na otutu uzo nwere ike. ndị ahịa. Dịka anyị nwere ike ịhụ na onyonyo dị n'elu, nke mbụ Sony ama ama na-enweghị okpokolo agba, na-enye anyị ihuenyo n'ihu nke na-aga site n'akụkụ ruo n'akụkụ ihuenyo ahụ na-ekpuchikwa ala dum, na-ahapụ naanị akara elu ebe idobe igwefoto n'ihu yana ihe mmetụta dị nso.
Na azụ nke ọnụ, anyị na-ahụ igwefoto abụọ ma ọ bụghị ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, ihe mmetụta nke nwere ike ịdị n'akụkụ bọtịnụ, dị ka Xperia Z5, cUlo oru abughi ihe kwesiri ekwesi, dị ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ kwuru. A na-atụ anya na n'ime, ị ga-ahụ Qualcomm Snapdragon 845, tinyere 4 na 6 GB nke RAM (ọnụ na-aga ahịa dị iche iche) nakwa na nha ihu nha ruru 6 sentimita asatọ. Iji kpochapụ obi abụọ ọ bụla, anyị ga-echere MWC nke a ga-enwe na njedebe nke ọnwa Febụwarị na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Sony mbụ ama ama na-enweghị okpokolo agba enweworị aha: Sony Xperia A Edge
Microsoft na-azụ ya ọgụgụ isi ka o wee gụọ uche gị